မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တတိယဆု၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုရရှိခဲ့သော ကယား ပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၏ စုပေါင်းလူထုလမ်းလျှောက်ပွဲ စတင်ဆင်နွှဲ
(၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂)
ပြည်သူများအနေနှင့် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော လူမှုနေ့စဉ် ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကယားပြည်နယ် လူထုအားကစားလ စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲအား (၂.၁၁. ၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၀၅၃၀) နာရီအချိန် လွိုင်ကော်မြို့၊ နာရီစင် တွင် စုရပ်အဖြစ်စုစည်း၍ လူထုအားကစားလလှုပ်ရှားမှု လမ်းလျှောက်ပွဲ အခမ်း အနားအားကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
လူထုစုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲသို့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီး၊သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဇနီး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်း စစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အသီးသီးမှ အားကစား ဝါသနာရှင် တိုင်းရင်းသားမိဘညီအစ်ကိုများ စုစုပေါင်း အင်အား (၁၆၀၀၀)ဦးခန့် စုပေါင်းပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ လူထုစုပေါင်း လမ်းလျှောက်ပွဲ အခမ်းအနားအား ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုက သေနတ်ပစ်ဖောက် ဖွင့်လှစ်ကာ နာရီစင်စုရပ်မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ကန္ဒါရဝတီလမ်းမကြီးအတိုင်း (၉) မှမှပတ်၍ ကျောက်သားရင်ပြင်သို့ ပြန်လည်စုစည်းပြီး အဆိုပါရင်ပြင်တွင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ Zumba အကများဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
လူထုအားကစားလ စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲတွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တစ်ရပ်အဖြစ် ကျပ်(၅) သိန်းတန်ဖိုးရှိ အားကစားပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံး၊ လူသုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း (၅၀)ကျော်ကိုလည်း လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်မှုများအပြီးတွင် မဲများဖွင့်ဖောက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ​ဘောလီ​ဘောပြိုင်ပွဲနှင့် ထုတ်စည်းထိုးပြိုင်ပွဲများအား ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ထို့အပြင် ​​ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် စု​ပေါင်းလူထုလမ်း​လျှာက်ပွဲများအား နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလ အပတ်စဥ် တနင်္ဂ​နွေ​နေ့တိုင်း အလှည့်ကျ ​ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ (၃.၁၁. ၂၀၁၉) ရက်​နေ့တွင် ​လောပိတ​ကျေးရွာအုပ်စု၊ ​လောပိတ​ကျေးရွာတွင် ​ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်​ကြောင်း သိရှိရပါသည်။